नेपालमै अब पानीबाट चल्ने कार र बाइक ! सलाम छ यि नेपाली युवालाई , जस्ले संसारलाई नै चकित पारे (भिडियो) – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/नेपालमै अब पानीबाट चल्ने कार र बाइक ! सलाम छ यि नेपाली युवालाई , जस्ले संसारलाई नै चकित पारे (भिडियो)
काठमन्डौ, तपाईं पनिबाट गाडी चलेको सुन्नुभएको छ ? सुन्दा सबैलाई अचम्म लाग्छ, तर बुटवलका एक युवा इन्जिनियरले पानीबाट गाडी चलाउने उपकरण तयार परेका छन्। जसलाई जुनसुकै गाडी तथा मोटरसाइकलमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
पानीबाट हाइड्रोजन र अक्सिजन छुट्छन्। हाइड्रोजन ग्यास पाइपलाई गाडीको इन्जिनमा लगेर जोडिन्छ। हाइड्रोजनको क्षमता पेट्रोलभन्दा तीनगुणा बढी हुने भएकाले यसले इन्धनले गर्नुपर्ने ४० प्रतिशत काम गर्छ।
यतिमात्रै होइन, यो डिभाइसले इन्जिनको क्षमता बृद्धि, पिकअप पावरबृद्धि र आवाजसमेत कम गर्ने इन्जिनियर जिसीले बताए।हाइड्रोजन ग्यास प्रयोगपछि गाडीले फाल्ने दुषित कार्बनमोनोअक्साइड जस्ता ग्यासको उत्सर्जन ५० प्रतिशत कम हुन्छ। इन्धनमा ४० प्रतिशत, इन्जिन क्षमता बृद्धि, वातावरण प्रदुषणसमेत ५० प्रतिशतले कम हुने उनले दाबी गरेका छन्।
डेढ वर्षको प्ररीक्षण सफल भएपछि शिशिरले बिक्री गर्ने गरी प्रजेक्ट सार्वजनिक गरेका छन्। यो डिभाइस दुई महिनाभित्र बजारमा पाइने उनले बताए। मूल्य कायम भइसकेको छैन। कारमा प्रयोग हुने डिभाइसको मुल्य ५० हजारभन्दा तल नै पर्ने उनले बताए। ‘१०० प्रतिशत नै पानीबाट चल्ने अर्काे प्रोजेक्टको तयारीमा छु,’ उनले भने,‘यसको प्रयोगसँगै त्यो पनि बनाउन थाल्छु।